Matipi ekutanga ekududzira Google Analytics data | ECommerce nhau
Google Analytics ndeimwe yewebhu ongororo maturusi ausingakwanise kupotsa. Nayo zvinokwanisika kuona nenzira yakapusa uye yakarongedzwa data revashandisi traffic, shanduko, nzvimbo dzavanobva, nezvimwe. Zvakare hunhu uye kudyidzana kunoitwa nevashandisi newebhu. Kubva panguva yemasangano ekushanya, mabhureji emitengo, uye iwo mapeji akamutsa kufarira kukuru, nezvimwe.
Saina ichi chishandiso, icho zvakare chiri chemahara, iyo ichatipa isu pakarepo mhinduro yekuti tiri kuita basa redu nemazvo sei. Kamwe mukati mechiratidziro, kuziva kududzira dhata nenzira kwayo kunotibatsira kuona matanho atinofanira kutora, kana kana tiri kunyatso kuwana mhedzisiro yatinogona kutarisira. Ndosaka nhasi tiri kuzotaura nezveakakosha matipi edudziro chaiyo yedhata iyo inowanikwa muGoogle Analytics.
1 Peji yekumba
2 Nzvimbo dzevashandisi
3 Iyo traffic inogadzirwa kubva pasocial network
4 Traffic maererano nemazuva kana maawa avanoshanyira webhu
5 Vashandisi vanobva kupi?
6 Mudziyo kubva panobatana vashandisi
7 Nhamba yeshanduko
Kushanyira peji rekumba kunotipa isu kwekutanga rumwe ruzivo rwakanyanya, kushanya kune webhusaiti yedu. Ikoko kunotipa data pamusoro pehuwandu hwevashandisi vakashanyira webhusaiti yedu, zvikamu, bhureti reti uye avhareji yenguva yechikamu. Asi, chii chakakosha icho data idzi dzinotipa?
Iwe uchaona pasi pehuwandu hwavo, iyo chikamu chekusiyana. Mune tsvuku kana iri yakaipa chiratidzo, kana girini kana iri yakanaka.
Vashandisi. Inoratidza huwandu hwevashandisi vakawana webhusaiti yedu. Zviripachena, zvirinani kuve nevashandisi vazhinji pane vashoma, asi izvo zvaunofanirwa kuteedzera vashandisi vehunhu. Zvishoma uye zvakanaka zviri nani pane zvakawanda uye zvakaipa. Tingaziva sei izvi? Kutenda kune iyo bounce rate uye chikamu chenguva.
Bhero Rate Iyo bounce rate inoenderana neavo vashandisi vanosiya webhusaiti mushure mekushanyira peji uye mukati memasekondi. Ndokunge, ivo havana kumutsa kufarira, kana panga paine dambudziko risina kuunza kuda kuziva. Iyo yakakwira bounce muzana inogona kuve dambudziko ratiri kusiri kutarisa zvinhu zvakanaka, kana kuti kune matambudziko echimiro. Iyo yakaderera iyi muzana, zvakanyanya kunaka zvazviri, zvinoreva kuti vanhu vanopedza nguva pawebhu.
Nguva yechikamu. Chimwe chidimbu cheruzivo chinotitaurira mhando yevashandisi vedu. Iyo yakakwira iyo avhareji nguva yevashandisi, chiratidzo chiri nani Izvi zvinoshandura mukumutsa kufarira, kuda kuziva, uye zvirimo zviripo zvinokosheswa. Zvisinei, Iyo yakaderera chikamu chikamu hachifanirwe kufanana nekugadzira zvakashata zvemukati. Zvingaite kuti mhando yemushandisi inoshanyira webhusaiti haisi iyo inotarisirwa, kana kuti zvirimo zviri kuparadzirwa kuburikidza nemikana kana pakati pevanhu vasingafarire zvirimo. Pakadaro, isu tinofanirwa kutsvaga nzvimbo kana mapoka uko izvo zvatinopa zvinofarirwa nedenderedzwa rakasarudzwa revanhu.
Inonyanya kubatsira kupatsanura vateereri vako, zvinokutendera kuti uzive kubva kunyika ipi uye kunyangwe guta vashandisi vako vanoshanya Iyo inowirirana zvakanyanya nezvinangwa uye zviyero zvezvigadzirwa kana masevhisi ayo ainopa. Panyaya yemablog uye masevhisi eruzivo rwechido izvo hazvitsamire pane chero kuvapo kunze kweiyo peji rako, pamwe hazvina kukodzera kudaro. Asi Kana webhusaiti yako ichiedza kutsvaga vatengi mune imwe nharaunda uye ikasawana mhedzisiro, iwe unofanirwa kuzvibvunza pachako kuti chii chiri kusashanda. Zvichida mazwi akakosha haasi iwo chaiwo, dandemutande harisi kusimudzirwa kwarinowirirana, kana kunyangwe mutauro kana madingindira ari kushandiswa.
Iyo traffic inogadzirwa kubva pasocial network
Yakabatanidzwa pane zvatakambotaura nezvevashandisi vemhando yepamusoro. Kugona uye kugona kwedu mushandisi kutsvaga kuri kuratidza. "Senge" kuwebhusaiti yedu pachayo haisi vimbiso yekuti ichaunza kuyerera kwekushanya. Kune ino kesi isu tinofanirwa kuona kuti vangani vashandisi pamusoro pevateveri vese vanowana yedu webhusaiti kuti vaone zvichangoburwa zvinyorwa. Haisi imwecheteyo "zviuru zvishanu" zvinoda "uye kuburitsa kushanya mazana mashanu, ndiko kuti, 5.000 muvanhu gumi, kuve nekufarira zviuru zvitatu uye kugadzira kushanya mazana manomwe, ndiko kuti, mumwe muvanhu vana.
Nenzira imwecheteyo, iyo bounce muzana uye avhareji yenguva yechikamu inozopedzisira ichiratidza kuwanda kwakawanda kwatiri kumutsa.
Traffic maererano nemazuva kana maawa avanoshanyira webhu
Zvinoratidzwa kuti chikamu chega chega kana dingindira rine chekuita nemaawa ekubatanidza evashandisi, zvinoenderana neprofile iri kutambwa. Chinhu chinonakidza mune idzi kesi kuziva maitiro ekushandisa iyi data ku ziva kuti ndeapi maawa nemazuva zviri zvakanyatsonaka kugadzira zvinyorwa kuti uwane hukuru hwakakura uye kukundikana. Zvichienderana nezvinangwa zvedu, chimiro chevanhu uye mhando yechikamu chatinobata (chitoro, blog, zororo, mubatanidzwa ...).
Vashandisi vanobva kupi?
Iwe une yakaderera organic yekutsvagisa (Google) kana ine yakanaka nhanho yemotokari? Ko pasocial media tsvaga iri kuenda, yakaderera mushandisi mitengo kana mushe mushe? Kunzwisisa chiteshi kunobva vashandisi vedu kunotitendera ziva kunaka kwedu SEO optimization kuri, kana kuziva kana ivo vashandisi vanotitevera isu pamambure vashandisi vemhando yepamusoro. Pano hazvidi kuti utsanangure zvakanyanya muzana (kana hongu, zvinoenderana nebhizinesi redu) asi huwandu hwetraffic.
Kana chinangwa chiri chekugadzira traffic kubva pasocial media nekuti iwe uri yezororo uye zviitiko kambani, semuenzaniso, kuva neSocial Plan inogadzira kuyerera kwekushanya chingave chinangwa chedu. Kana izvi zvikasakwanisika, zvinenge zvichidikanwa kuongorora zviri kuitika. Saizvozvowo, kana isu tichifarira kumira kwedu muGoogle, asi iyo muzana yemotokari inogadzirwa yakaderera, tinofanira kuona SEO yedu uye / kana kukumbira zano rehunyanzvi.
Mudziyo kubva panobatana vashandisi
Imwe ye data ratino kupihwa neGoogle Analytics ndiyo muzana kubva kwachinoburitswa mudziyo. Nenzira iyi, tinogona kutarisa nekugadzirisa webhusaiti yedu iine sarudzo yakasarudzika yerudzi rwechigadzirwa chinobva kune vedu vashandisi. Kuva neyakagadziriswa dhizaini inogara iri sarudzo chaiyo yekudzivisa kurasikirwa nevashandisi, nekuda kwenjodzi dzakadai senge webhusaiti, kunyangwe ichitaridzika zvakanaka kubva pakombuta, haina chimiro chakanaka kubva parunhare, semuenzaniso.
Chekupedzisira, iyo nhamba yeshanduko yatiri kuwana. Ive iko kutenga, kunyoreswa, kunyoreswa, nezvimwe. Zvakare Iyi sarudzo inogona kugadzirirwa kutsanangura zvinangwa uye kuona zvatiri kuyera. Nekuda kweizvi, isu tichakwanisa kuziva kuti chiyero chekushandurwa kwewebhu chinoshanda zvakadii.
Kazhinji, iwo haasi akakwirira muzana, asi panzvimbo pacho akaderera. Asi nekuda kwemamwe matekinoroji uye maturusi, senge bvunzo dzeA / B kana mepu dzekupisa, tinogona kunatsiridza aya mapesenti. Google Analytics inogona kugadzirirwa kuyera zvinoenderana nezviito zvatinotarisira kubva kune mumwe mushandisi.
Tamba uye unakidze neGoogle Analytics, uye iwe unozotanga kuona kuti pakupedzisira sei traffic iwe yauri kutyaira zvakanyanya iwe nesarudzo dzako. Ndinovimba ichi chinyorwa chakushandira iwe, uye kuti mhedzisiro yako ichazongo gadziridza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Matipi ekutanga ekududzira data reGoogle Analytics